Best Webforum nanomboka tamin'ny 2004
more ...Sarimihetsika manokana ho an'ny lohateny, fotoana fihodinana fohy
Mamorona forum malalaka
Safidio ny anaran'ny kaonty (ny subdomain) ary fidio ny adiresy mailakao. Aza adino fa ny tenimiafinao mpandrindra voalohany dia halefa any amin'ny adiresy mailaka anao. Tsy hahazo ny mailaka spam na doka avy aminay akory ianao. Na izany aza, mety hitranga fa ny mailaka miaraka amin'ny tenimiafinao mpandrindra voalohany dia tonga ao amin'ny lahatahiry spam.
Ny rafitry ny forum automated dia hametraka ny forumo maimaim-poana ao anatin'ny segondra. Azonao atao ny miditra ao ho eo ary hitantana ny zava-drehetra. Vonjeo ny aretin'andoha sy vola be amin'ny alàlan'ny forum malalaka fa tsy ny fametrahana forum anao manokana amin'ny mpizara anao! Tsy mila miahiahy momba ny fanafihana spam ianao, fanavaozana rindrambaiko, fidirana, vidin'ny fifamoivoizana, fandaharana na zavatra hafa. Mifantoha amin'ny fiaraha-monina misy anao ary hanao ny ambiny isika! Ny fiarovana ny datao dia zava-dehibe ho anay. Izany no antony mahatonga ny mpizara antsika any Aotrisy ary noho izany dia manaraka ny fepetra hentitra fiarovana amin'ny data. Misaotra ny vondronay tsy manam-paharoa, ny forumo dia afaka mitsidika mpikambana an'arivony avy hatrany aorian'ny fisoratana anarana. Vonona hanomboka eo noho eo ny fidirana anaty serivisy ny forumo ary mora ny manamboatra ihany koa.
Anaran'ny kaonty [A-z sy 0-9]: .webboard.org
Miaraka amin'ny famoronana ataonao Fepetra fampiasana.
Ny rafitry ny forum automated dia hametraka ny forumo maimaim-poana ao anatin'ny segondra. Azonao atao ny miditra ao ho eo ary hitantana ny zava-drehetra. Vonjeo ny aretin'andoha sy vola be amin'ny alàlan'ny forum malalaka fa tsy ny fametrahana forum anao manokana amin'ny mpizara anao! Tsy mila miahiahy momba ny fanafihana spam ianao, fanavaozana rindrambaiko, fidirana, vidin'ny fifamoivoizana, fandaharana na zavatra hafa. Mifantoha amin'ny fiaraha-monina misy anao ary hanao ny ambiny isika! Ny fiarovana ny datao dia zava-dehibe ho anay. Izany no antony mahatonga ny mpizara antsika any Aotrisy ary noho izany dia manaraka ny fepetra hentitra fiarovana amin'ny data. Misaotra ny vondronay tsy manam-paharoa, ny forumo dia afaka mitsidika mpikambana an'arivony avy hatrany aorian'ny fisoratana anarana. Vonona hanomboka eo noho eo ny fidirana anaty serivisy ny forumo ary mora ny manamboatra ihany koa. Mihatra ny teny ampiasaina amin'ny tondrozotra.